Ugu Weyn Ee Svetlyanka
Sida loola tacaalo cayayaanka iyo cudurada viburnum
Kalina waxaa loo yaqaan dhammaan geedaha, taas oo ina siinaysa nooca berry leh bogsiinta guryaha. Laakiin Kalina ayaa mararka qaar ka soo kabata cayayaanka iyo cudurada. Waxay siiyaan dhib badan: waxay cunaan oo ay waxyeeleeyaan caleemo iyo ubaxyo, si xun u saameeya xaddiga goosashada. Cayayaanka Viburnum iyo sida loo xakameynayo jiritaanka caleemaha Kalinous
Dareemayaal badan ayaa ka cabanaya in cagaarshow uu huruud noqdo oo la qubaysto, sidaa daraadeed maqaalkan waxaa loogu talagalay inuu kuu sheego waxa la samaynayo warshad jiran iyo sida loo aqoonsado wakiilka keena cudurka. Dhibaatooyinka suurtagalka ah iyo cudurrada asparagus, hababka daaweynta Asparagus ayaa leh qooyska asparagus. Tani waa liana dilka ah, oo leh dhar khafiif ah oo caleemo leh iyo caleemo caleemo ah oo u eg cirbadaha.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Svetlyanka 2020